mParticle: Ururi oo ku Xidh Macluumaadka Macaamiisha adoo adeegsanaya Hubi API-yada iyo SDKs | Martech Zone
Macaamiil dhaweyd oo aan la shaqeynay wuxuu lahaa qaab dhismeed adag oo isku dhafan darsin ama wax la mid ah iyo xitaa meelo badan oo laga soo galo. Natiijadu waxay ahayd tan oo isku mid ah, arrimaha tayada xogta, iyo ku adkaanta maaraynta hirgelinta dheeraad ah. In kasta oo ay naga doonayeen inaan wax dheeraad ah ku darno, waxaannu kula talinnay inay aqoonsadaan oo ay hirgeliyaan Nidaamka Xogta Macaamiisha (CDP) si loo maareeyo dhammaan qodobbada gelitaanka xogta nidaamyadooda, loo hagaajiyo saxsanaanta xogtooda, loo hoggaansamo heerar kala duwan oo sharciyeyn ah, iyo in la sameeyo is-dhexgal dhufto oo dheeraad ah oo aad u fudud.
Platform Data Macaamiisha mParticle
Maqaal wuxuu leeyahay APIs adag oo aamin ah iyo wixii ka dambeeya 300+ xirmooyinka soosaaraha softiweerka la soo saaray (SDKs) si aad si fudud ugu maamuli karto xogta macmiilkaaga bartamaha, u geyn karto isku xirnaanta si dhakhso leh, iyo inaad hubiso in xogtaadu ay nadiif tahay, cusub tahay, oo waafaqsan. Barnaamijkoodu wuxuu bixiyaa:
Xiriirinta Xogta - Ku ururi xogta API-yada iyo SDK-yada aaminka ah kuna xir dhammaan qalabyada iyo nidaamyada kooxdaada. Soo gal xogta macaamiisha halka aad uga baahatid adigoon dhib ku qabin maareynta nambarka saddexaad. Isku-darka nidaamyada xayeysiinta, barnaamijyada falanqaynta, barnaamijyada adeegga macaamiisha, nidaamyada suuqgeynta nidaamyada maaliyadeed, nidaamyada maareynta oggolaanshaha, iyo aaladaha amniga ayaa laga heli karaa 300 + SDK. Waad ku shubi kartaa xogta xalalka bakhaarka xogta weyn oo ay ku jiraan Amazon Redshift, Snowflake, Apache Kafka, ama Google BigQuery waqtiga-dhabta ah. Ama, dabcan, waxaad ku dhexgeli kartaa barnaamijyadaada adoo adeegsanaya API-ga adag.
Tayada Data - Wanaaji tayada xogta macaamiishaada oo aad si fiican ugu shaqeysid adoo abaabulaya, maamulaya, oo ansaxinaya xogta macaamiisha kahor intaan lala wadaagin nidaamyada hoose.
Maamulada Xogta - Maareynta u hoggaansanaanta xeerarka asturnaanta xogta iyo taageeridda baahiyaha maamul ee ururkaaga. Ku ilaali asturnaanta macaamiishaada macluumaadka deegaanka, u hoggaansamida CCPA, codsiyada mawduuca GDPR, maaraynta oggolaanshaha GDPR, ilaalinta xogta PII, iyo maareynta u hoggaansamida iyo oggolaanshaha OneTrust.
Shakhsiyeynta Xogta Lagu Wado - Abuur khibrado shaqsiyeed adoo adeegsanaya xogta macaamiisha taariikheed iyo waqtiga dhabta ah. Abuur dhagaystayaal, astaamo xisaabeed, astaamaha isticmaalaha omnichannel, iyo isticmaal LiveRamp si loo gaarsiiyo khibradaha macaamiisha shaqsi ahaaneed.
La xiriir khabiir mParticle ah si aad ugala hadasho sida loo dhexgalo loona abaabulo xogta macaamiisha habka saxda ah ee ganacsigaaga.
Eeg Dhammaan iskudhafka mParticle Sahmi mParticle Demo
Tags: Isdhexgalka AdTechisdhexgalka xayeysiintaRedshift Amazonisdhexgalka falanqayntaApache KafkaAPIbarnaamijka barnaamijyada barnaamijkaqalabayntaxog weynCDPxogta macaamiishaxogta macaamiisha apiMadal Macluumaadka Macaamiishais dhexgalka adeegga macaamiishais dhexgalka madal maaraynta xogtaisdhexgalka bakhaarka xogtais dhexgalka adeegga maaliyadeedGoogle BigQueryMaqaalSnowflakexirmada barnaamijyada soosaarka softiweerka